Moodhadhka Android iyo Muuqaalka Sawiridda Waalidiinta
Google ugu dambeyn wuxuu ku darayaa waxyaabo ammaan ah oo loogu talagalay waalidiinta jahwareerka leh
Carruurtayadu waxay si joogta ah u weydiinayaan inay isticmaalaan taleefannadayada, haddii ay ciyaaraan cayaar, daawashada fiidiyowga baabuurka dheer, ama wax kasta oo ay dhici karto, ma joojin doonaan weydiista iyaga. Waxaan mararka qaarkood ku qasban nahay, laakiin waanu ogaannaa inay jirto halis ku lug leh. Carruurtu waxay jecel yihiin in ay gujiyaan sheyda, waxay tirtiri karaan kala badh barnaamijyadeena sababtoo ah waxay bartay sidii loo tirtiri lahaa app oo ay u maleynayaan in ay sidaas tahay.
Weligaa ma ogaanaysid waxa aad doonayso inaad la soo baxdo markaad taleefankaaga ka soo celiso ilmahaaga. Nasiib wanaag, qaar ka mid ah horumariyayaasha nidaamka Android waa inay sidoo kale leeyihiin kuwa yar yar sababtoo ah waxay ku fikireen inay ku daraan qaar ka mid ah waxyaabo cusub oo waalidku u shaqeynayo si ay ugu daabacdo joornaalka ugu dambeeya Android Android.
Qaybta 5.0 ( Lollipop ) ee Android OS waxay ku dareysaa laba muuqaal oo cusub kaas oo gacan ka geysanaya in la yareeyo xiisaha cunugaada ee jebinta alaabtaada. Nidaamka cusub ee hawlgalka ayaa hadda leh "Mode Guest" iyo "Screen Pinning".
Aynu wax ka baranno sifooyinkaan cusub iyo sida aad ugu jeedin kartid si ay u caawiyaan ilaalinta caafimaadkaaga:
Fiiro gaar ah: Noocyadaasi waxay u baahan yihiin in qalabkaagu uu leeyahay Android 5.0 (ama ka dib) OS rakibay.
Qaab dhismeedka cusub ee martida ayaa kuu oggolaanaya inaad leedahay hannaan guud oo dadweynaha ah oo caruurtaada (ama qof kasta oo u baahan inuu isticmaalo taleefankaaga wax) isticmaali karo. Qeybtan waxaa laga soocay profile-kaaga shakhsi ahaaneed si aysan u arki karin ama aanad ufaqeynin mid ka mid ah xogtaada, sawiradaada, fiidiyowyada, xitaa ma aha barnaamijyadaada. Waxay ku rakibi karaan barnaamijyada dukaanka Google Play iyo haddii barnaamijka horayba ugu jiro telefoonkaaga, waxaa lagu soo koobi doonaa profile-kaaga (halkii aad dib ugu soo dejin lahayd).
Marka laga soo tago fariimaha martida, waxaad si dhab ah u abuuri kartaa faahfaahin shakhsi ahaaneed ee mid kasta oo ka mid ah caruurtaada si ay u heli karaan barnaamijyadooda gaarka ah, muraayadaha, iyo qalabka kale.
Si aad u sameyso Habka martida:
1. Laga soo bilaabo korka shaashadda, hoos u dhufo si aad u muujiso ogeysiisyada.
2. Labo jeer-ku dheji sawirkaaga astaanta astaanta midigta. Saddex simon ayaa soo bixi doona, koontadaada Google, "Add guest" iyo "Add user".
3. Dooro "Add Guest" dooro.
4. Markaad dooratid "Doorashada martida", qalabkaagu wuxuu u maleynayaa inuu qaato dhowr daqiiqo si uu u buuxiyo nidaamka Moodhalka Moodka.
Markaad ku dhameysato habka martida waxaad dib ugu rogi kartaa astaantaada adoo ku celinaya labada tallaabo ee kore.
Mararka qaar waxaad u baahan tahay inaad telefoon u dirto qof si aad u muujisid wax laakiin aadan rabin inay awood u yeeshaan inay ka baxaan app oo ay bilaabaan nosing alaabtaada. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad caruurtiina u ogolaato ciyaar laakiin ma rabto in ay siiso furayaasha maahmaahda boqortooyada. Xaaladaha sida kuwaan kuwan ka mid ah, qaabka cusub ee Pinning Screen waa xal fiican.
Screen pinning ayaa kuu ogolaanaya inaad sameyso si codsiga hadda uusan u ogolaaneynin inuu ka soo baxo iyada oo aan la furin telefoonka. Waxay isticmaali karaan app ah oo "halaagsan" meel, waxay kaliya ma ka bixi karaan app aan lahayn code furin:
Si aad u sameysid Screen Pinning:
2. Fiiri taariikhda iyo waqtiga goobta baraha ogeysiinta, ka dibna ku dheji ikhtiyaarka jilaalka si aad u furto shaashadaha goobaha.
3. Ka fiiri "Qaababka" shaashadda "Amniga"> "Advanced"> "Screen Pinning"> kadibna u beddel jidka "ON".
Tilmaamaha loo isticmaalo sida loo isticmaalo shaashadda shaashadda tooska ah ayaa si toos ah hoos ugu dhigta meesha lafteeda.
Maxay tahay mashruuca Google?
Sida Loo Helo Lacagta Kumbuyuutarka Kumbuyuutarka
Hayso MP3 Songs ee Amazon Cloud, iCloud, iyo Google Play Music
Waa Maxay Google Clips Isaga iyo Sida aad u Isticmaalin karto
Sida loo xiro Your Android Device Wi-Fi
Maxay Tahay Sababta CPGZ?
Ka hor intaadan iibsan telefoonada gacanta ama telefoonada casriga ah
The 5 Software Best Antivirus Best of 2018
Abuuri Bogga cusub ee Shabakadda Isticmaalka Qoraalka
Sida loo Isticmaalo Fasaxyada Microsoft Edge
5 Talooyin ku Saabsan Nabadgelyada Twitterka
8da miisaaniyadeed ee miisaaniyada ugu fiican ee lagu iibsado sannadka 2018 ee ka hooseeya $ 500
Sida loo Isticmaalo Qalabka iyo Ciyaaraha
Sidee loo Nadiifiyaa Noocyada Macalinkaaga
TransferBigFiles.com - Adeegga Lacag-bixinta ee Lacag-bixinta ee Lacag-bixineed ee Lacag Leh Laheen
Qof kastaa wuxuu ciyaaraa Slither.io (sida ay tahay inay noqdaan)
Wac Gacantaada Pro Pro ah!
Sida loo qaabeeyo saxiixaaga Yahoo
U Isticmaal Foomka Nooca wanaagsan ee Facebook App si aad u heshid boggaga ugu fiican
Caqiidooyinka caanka ah ee ku saabsan Copying iyo wadaagista MP3s iyo CDs
3 Talaabooyin lagu qoro Magacyada Wargeysyada Wanaagsan ee Blog
Dhameysta Sarkaalka leh Subwoofer
Ku dhejinta iyo Editing leh Sawirada Xafiiska Furan
Maxaad uga Qaybqaadataa Isgaadhsiinta Bulshada ee Shabakada?